कमेडी च्याम्पियनका होस्ट मेक्समलाई किन शोबाट निकालियो ? - dautarimedia.com
कमेडी च्याम्पियनका होस्ट मेक्समलाई किन शोबाट निकालियो ?
कमेडी च्याम्पियनका होस्ट मेक्समलाई किन शोबाट निकालियो ? मेक्समलाई निकालीनुको कारण सुनेर तपाई पर्नुहुनेछ दंग, रिमा र केकी अधिकारीले खोले मेक्समले गरेको बदमासीको रहस्य, स्यागंजाली पारा देखाएछन् मेक्समले, हेर्नुहोस् भिडियो
पारस साहमा फरी अचानक फेरबदल आएको छ । जसका कारण पूर्व राज परिवार समस्यामा परेको बताइन्छ । जसका कारण अब पारसलाई पहिला जसरी डुल्न नदिइने बताइएको छ । यस साता नेप्से परिसूचक साढे २ प्रतिशत बढेको छ।
गत साता ३००४.३१ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस साता साढे २ प्रतिशत अर्थात ७५.५२ अंक बढेर ३०७९.८३ विन्दुमा पुगेको छ।यस साता नेप्सेले नयाँ अलटाइम हाइ रेकर्ड बनाएको थियो। गत बुधबार नेप्सेले नयाँ अलटाइम हाइ बनाएको थियो। सो दिन नेप्से ३०९४.९५ विन्दुमा पुगेर नयाँ अलटाइम हाइ बनाएको हो।
तर, साताको अन्तिम कारोबार दिन भने नेप्सेमा सामान्य करेक्सन भइ ३०७९.८३ विन्दुमा झरेको छ। यस साता सेन्सेटिभ इण्डेक्स ८.६१ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ४.४९ अंक बढेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स २.७७ अंक बढेको छ।
नेप्सेसँगै यस साता कारोबार रकम पनि बढेको छ। गत साता ४२ अर्बको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस साता ६७ अर्ब ७४ करोड बराबरको १६ करोड ७५ लाख कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेकोले लगानीकर्ताहरु उत्साहित छन्।
यस साता नेप्सेको कुल बजार पूँजीकरण १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। गत साता ४१ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेप्सेको कुल बजार पूँजीकरण गत साता बढेर ४२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यस साता कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये ११ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी २ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबारमा आएको होटल उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक ७.८९ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, अंकका आधारमा सर्वाधिक बढेको उपसमूह जीवन बीमा उपसमूह हो।
सो उपसमूहको परिसूचक गत साता ७१४.५३ अंक बढेको छ। यता म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.१८ प्रतिशत घटेको छ। फ्लोरसिट विश्लेषण गर्दा यस साताको मोस्ट पपुलर बाइ स्टकको सूचीमा महिला लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड, साना किसान लघुवित्त र एस्केल डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।
यता मोस्ट पपुलर सेल स्टकको सूचीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, सनराइन ब्लुचित फण्ड, कुमारी इक्विटी फण्ड लगायतका कम्पनीहरु परेका छन्।
Previous: बारबरा फाउन्डेसन कोभिड-१९ विशिष्ट सम्मान प्रदान
Next: मेलम्चीमा १ असारको भन्दा पनि ठूलो बाढी, धेरै भौतिक संरचनामा क्षति